गलबन्दीमा कसले लगाउदैछ जातीय रंग ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | १२ असार २०७६, बिहीबार ००:३७ |
गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर
यतिखेर यो गीत जति चर्चित छ,उत्ति नै चर्चामा छन् यसका गायक प्रकाश सपुत । मिडियादेखि संसदसम्म स्पेश पाएको छ–यो गीतले ।
गीत रिलिज भएको शुरुवाती साता गलबन्दी विशुद्ध गीतको गायकी,भिडियो र मोडल अञ्जली अधिकारीको स्वभाविक अभिनयका कारण लोकप्रिय बनेको थियो । तर अहिले यही गीत पछिल्लो समय भने इगो पोलिटिक्सका कारण चर्चामा छ । सीधा अर्थमा भन्नुपर्दा गीतको सिर्जनाको स्वामित्व कसको भन्ने विषयमा गलबन्दी मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रकाशले आफ्नै शब्द र संगीत भनेर सार्वजनिक गरेको गीतको लय आफ्नो गीतसँग मिलेको भन्दै पूराना गायक शम्भु राईले दाबी गरेपछि गीतको कपिराइट मुद्दा सतहमा आएको छ ।
दुवै गायकका गीत सुन्दा हुबहु नभए पनि कतै न कतै प्रभावित चाहिं हो भन्न सकिने आधार छ । तर अर्को कुरा लोक गीतको लय मिल्नु अनौठो कुरा पनि मानिदैन । किनभने लोक गीत विशुद्ध लोकले गाउने गीत हुन् । गलबन्दीको सवालमा प्रकाशले यसभन्दा अघि आफूले शम्भु राईको उक्त गीत सुन्दै नसुनेको किरिया खाइदिएपछि शम्भु राई अलि बढी चिढिएका हुन् । त्यसपछि उनले कपिराइटको मुद्दा समेत हालेको खबर सार्वजनिक भएको छ ।
गीतको लयका बारेमा विवाद आएपछि प्रकाशले शम्भुका नाममा खुला पत्र नै लेखे । निकै लामो भावुक पत्रमा प्रकाशले धेरै शब्द खर्चेका छन् । तर जान अञ्जानमा कुनै गल्ती भएको भए माफी पाउँ भन्न छुटाएका छन् । उनले लेखेका छन्–
सर भाका मिलेकै छैन ? काँ मिलेको छ ? भनेर तपाईको बिचारलाई तपाईको फिलिङसलाई तपाईको प्रत्यक तर्कलाई म खण्डन गर्न चाहन्न । तपाईले आफैले भन्नु भएको थियो–म तपाईको छोरा भन्दा पनि धेरै कान्छो उमेरको छु । तपाई मेरो बुबा भन्दा पनि बढि उमेरको हुनुहुन्छ । यसकारण तपाईको भोगाई, तपाईको अध्ययन अनुभव, तपाईको योगदान तपाईको सफलताको अगाडि म धेरै बच्चाछु । उमेर अनुभव र समयले पनि म केटकेटी नै हो । एउटा स्रोता भएर सुन्दा गलबन्दी र आउ नाचौं १÷२ ठाउँ उस्तै उस्तै सुनिन्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ । ओई सुन्त मिलेको छ यार भनेर यी दुई गीत ( अलिकति स्पीड बढाएर) फोर्सफुल्ली एकै चोटि सुनाउने हो भने जोकोहिको मनमा पनि आउछ होला – हा ेत यार मिलेकै रैछ । तर अलि गहिरिएर सुन्ने हो भने ठ्याक्कै मिलेको चाहि छैन कि सर । कपि हुनलाई त पुरै र्याङ कि ठ्याङ मिल्नु पर्ने हैन र । सेम टु सेम भएपछि त फ्याट्टै चिनिन्छ सर । यसरी मत नै बाझिदैन । हेर्नुस त दर्शकहरु बाँडिएको । कसैलाई लाग्छ मिल्छ । कसैलाई लाग्छ मिल्दैन । त्यसैले यो दर्शकलाई भजाएर हामी कबड्डी कबड्डी जस्तो मिडिया–मिडिया नखेलौं सर ।
प्रकाश कहाँ चुके ?
विश्वका सबै संगीतका सुर र नोटेसन एउटै हुन्छ । त्यसैले कहिलेकाहीं संयोगले एक दुई गीत मिल्न पनि सक्छन् । त्यसमाथि गलबन्दी गीत यतिसम्म मिलेको भन्ने महसुस भएपछि प्रकाशले अञ्जानमा मिल्न गएकोमा विनम्रताकासाथ शम्भुलाई कन्भिन्स गराउनु पथ्र्यो । तर उनले अनेक भावनात्मक शब्दहरुको उल्झन थापेर शम्भुको दाबीलाई गलत सावित गर्ने कोशिस गरेको देखिन्छ । एउटै नोटेशन र सुरमा संयोगले मिल्न गएको सिर्जनामा पनि शम्भु कन्भिन्स नभए लयको क्रेडिट शम्भुलाई दिदा पनि प्रकाशको उचाइ घट्ने थिएन,बरु उनको बडप्पन र नम्रता देखिन्थ्यो । प्रकाश यसमा चुक्नुले के दर्शाउँछ भने नयाँ सर्जकहरुमा पूराना र अघिल्ला स्रष्टाहरुप्रति डोमिनेटिङ बुझाइ छ । कमसेकम प्रकाशबाट कसैले यस्तो अपेक्षा गरेकै थिएनन् तर यसमा उनी चुके ।
शम्भु ठीक छन् त ?
गलबन्दीको मुद्दा मामिलामा शम्भु राई ठीक छन् भनेर लेख्ने हो भने यो लेखको कुनै औचित्य रहने छैन । किनभने त्यो पक्षपातपूर्ण हुनेछ । हो,आफ्नो सिर्जनामाथि कसैले छेडछाड गरे वास्तविक स्रष्टालाई अवश्य चित्त दुख्छ । तर प्रकाशले कुनै छेडछाड गरेका छैनन् । तर आन्तरिक सहमतिमा टुंगिनुपर्ने र टुंगिन सक्ने विषय जसरी सतहमा ल्याइयो,त्यसले शम्भुलाई नै घाटा पुगेको छ । नेपाली संगीत क्षेत्रका स्थापित व्यक्तित्वले नयाँ पुस्तासँग इगो साँधेर सीमित पपुलारिटी र मास एटेन्सन पो खोजेका हुन् कि भन्ने आम जनमानसमा परेको छ । यसले शम्भुलाई पपुलरिटी प्रिय व्यक्तित्वका रुपमा बुझिदिए उनको उचाइलाई त्यसले छोटो पारिदिनेछ । यथार्थमा शम्भु राई आफैं यस्तो सांगीतिक उचाइमा छन्,जहाँ पुग्न प्रकाशले वषौं साधना गर्नुपर्छ । यसमा प्रकाश पनि सहमत छन् र हुनुपर्छ । आइकन हुनु र पपुलर हुनु अलग अलग कुरा हुन् । प्रकाश आजका दिनमा जति पपुलर छन्,शम्भु राई उत्ति नै सम्मानित म्यूजिकल आइकन हुन् ।
गलबन्दीमा जातीय र स्वार्थको दाग कसरी ?
दुई स्रष्टाहरुको स्वामित्व विवादकाबीच पछिल्लो समय जातीय रंग मिसाइन थालेको छ । प्रकाशलाई उसको जातसँग जोडेर अपमान गरेको भन्दै संसदसम्म आवाज उठेको छ । यो चिन्ताजनक अवस्था हो ।
कसैलाई जातीय रुपमा अपमानित गर्नु संविधान विपरित कार्य हो । जसले जे कारणले गरेको भए पनि यो दण्डनीय छ । तर आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट भन्नुपर्दा कहिलेकाहीं मुल मुद्दालाई डाइभर्ट गर्न र संवेदना आकर्षित गर्न यस्तो चाल चाल्ने गरेको उदाहरण नेपालमै धेरै छन् । शम्भुलाई कमजोर र गलत देखाउन यो कसैबाट नियोजित रुपमा चालिएको कदम हो भने दोषीलाई कारवाही गर्न प्रकाश आफैंले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।
यसैबीच शम्भु र आफूबीचको विवादलाई जातीय रंग दिन थालेपछि प्रकाशले फेरि लेखेका छन्–
मैले फेरी एक पटक स्पष्ट भन्छु,नआउनु समस्या आईहाल्यो । यसले यदि भेगीय जातीय राजनीतिक रुप लियो भने दर्शक स्रोताले हामी दुईलाई मात्रै होईन सम्पूर्ण सर्जक स्रष्टा कलाकारलाई विभिन्न खेमामा बाँड़ेर हेर्नेछन् । साझा माया र लोकप्रियता सबैको घट्दै जानेछ । त्यसैले व्यक्तिगत रुपमा शम्भु राई सरको कुरा सम्बोधन हुने गरी हामीबीचको समस्या समाधान गर्ने अनि मात्रै यो घटनाबाट उब्जिएका अत्यन्त गम्भीर तर अस्पष्ट विषयहरुमाथि तपाईहरुसँगै जोडिएर बहसमा बस्ने मनसाय भएको हुदा बुधवारसम्मका लागि व्यक्तिगत रुपमा मैले रेस्पोन्स गरिन, यी विषयहरुलाई ईग्नोर गर्यो, संस्थागत भएन जस्ता गुनासाहरु नगरिदिनु होला । पहिलो कुरा त म मानसिक रुपमा एकदमै विचलित भएको छु अन्य विषयहरुमा ध्यान जान सकेको छैन ।
अर्को कुरा म चाहन्छु कुनै भेगीय, जातीय, धार्मिक र राजनैतिक प्रभाव नपरिकन सकेसम्म संगीत सम्बद्ध संघसंस्था, संगीतकर्मीहरु र रजिष्स्टार कार्यालयको रहोबरमा यो भाका विवाद मिलोस् ।
गलबन्दी गीत साँच्चिकै मीठो छ । यसको लय क्याची छ । भिडियो उत्कृष्ट छ । मोडल अञ्जली अधिकारीले गीतको मूल्य अझ बढाएकी छिन् । यो गीत जसको सिर्जना भए पनि चल्यो । गीत सुन्ने र हेर्नेले कसको सिर्जना भनेर शायदै हेक्का राखे होलान् । गीत मनपराएपछि बल्ल प्रकाश सपुतलाई नोटिसमा राख्ने धेरै छन् । यस्तो अवस्थामा एउटा गीतलाई लिएर मम र तँतँको जुहारी खेल्नु भन्दा सहमतिको एउटा विन्दुमा पुगेर बिट मार्नु उत्तम हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा न शम्भु न त प्रकाशको जीतहार हुनेछ । किनभने समग्रमा त्यो नेपाली संगीत क्षेत्रको जीतहार मानिनेछ । गीतले भने जस्तै एक अर्काको तानातानमा पछ्यौरी रुपी नेपाली संगीतको इज्जत अर्थात साखको धज्जी नउडुन् ।
Previousयस वर्षको एसइईको नतिजा आज सार्वजनिक गर्ने तयारी
Nextसरकारमा रहेका मन्त्रीको जिम्मेवारीमा हेरफेर हुने,कम्तीमा ६ मन्त्री फेरिने
१४ आश्विन २०७७, बुधबार ०३:४७
२४ भाद्र २०७५, आईतवार ०६:४७